Pane chipa kutumirwa mutengo kupinza kunyika yedu?
Nokuti murayiro duku, ratidza achava zvakanakisisa. Uye hombe murayiro, chikepe gungwa nzira yakanakisisa asi tora nguva yakawanda. For zvokukurumidzira varayirwa, isu anoratidza vachishandisa mhepo kutumirwa.
Unogona kugadzira ari kutaurwa chigadzirwa kwatiri?
Tinogona kugadzira ari kutaurwa zvinhu kana kuunza mharidzo kwatiri kana kutiudza zvakadzama.
Sei pamusoro chokuendesa zvinhu zvenyu?
A: Zvandakashanda: 7 mazuva;
Formal Orders: Kazhinji mazuva 25 mushure inosimbisa.
Urgent Orders: Tapota anotiudza sezvo mangwanani sezvinobvira zvigadzirwa vasati vagadzirira.
A: The mutengo kunobva chinhu kwenyu kwokudiwa (Zvakaita, saizi, uwandu)
Vachazvirova mashoko agamuchira rondedzero chinhu chaunoda zvizere.
Ndezvipi muripo iwe kugamuchira?
Tinobvuma T / T, L / C, DA, DP, Long Term Credit.
Kana ndisiri kugutsikana nhumbi dzako zvandagamuchira, ndaifanira kuitei?
Kana wawana chinhu chakaipa zvinhu zvedu, tapota kutora mifananidzo vavo pakutanga uye kutumira mifananidzo kwatiri kuitira kuti tinogona kusimbisa chii nyaya. Kana chiri pamusoro yedu basa, isu achabva zvigadzirwa uye kukutuma nevatsva kuti misha. The ukama mari achava pamusoro pedu.